3 Zvino akandiratidza mupristi mukuru Joshua+ amire pamberi pengirozi yaJehovha, uye Satani+ akamira kuruoko rwake rworudyi kuti amurwise.+ 2 Ngirozi+ yaJehovha yakabva yati kuna Satani: “Jehovha ngaakutuke,+ haiwa iwe Satani, chokwadi Jehovha ngaakutuke, iye ari kusarudza Jerusarema!+ Uyu haasi danda rakabvutwa mumoto here?”+ 3 Zvino Joshua akanga akapfeka nguo dzakasviba,+ akamira pamberi pengirozi. 4 Iye akabva ati kune vaya vakanga vakamira pamberi pake: “Mubvisei nguo dzakasviba.” Akatizve kwaari: “Ona, ndabvisa kukanganisa kwako pauri,+ wava kupfekedzwa nguo refu dzomutambo.”+ 5 Ndakabva ndati: “Ngavaise ngowani yakachena mumusoro make.”+ Zvino vakaisa ngowani yakachena mumusoro make, vakamupfekedza nguo; uye ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pedyo. 6 Ngirozi yaJehovha yakatanga kupupurira Joshua, ichiti: 7 “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Kana ukafamba munzira dzangu, uye kana ukachengeta zvinhu zvangu zvaunosungirwa kuti uite,+ iwe uchabva watongawo imba yangu+ uye uchachengetawo zvivanze zvangu; uye ndichakubvumira kupinda wakasununguka pakati peava vakamira pedyo.’ 8 “‘Ndapota, inzwa, haiwa iwe mupristi mukuru Joshua, iwe neshamwari dzako dzakagara pamberi pako, nokuti ivo vanhu vari kushanda sezviratidzo;+ nokuti ndichaunza mushumiri+ wangu anonzi Nhungirwa!+ 9 Nokuti tarira! dombo+ randakaisa pamberi paJoshua! Padombo rimwe chete pane maziso manomwe.+ Tarira ndichatemera runyoro rwaro,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘uye ndichabvisa kukanganisa kwenyika iyoyo muzuva rimwe chete.’+ 10 “‘Pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, ‘mumwe nomumwe achashevedza mumwe wake, ari pasi pomuzambiringa uye ari pasi pomuonde.’”+